Sida Loo Sameeyo Website Xubinimo (5 Tilaabo) | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida Loo Sameeyo Website Xubinimo (5 Tilaabo)
Sida Loo Sameeyo Website Xubinimo (5 Tilaabo)
0 Daqiiqado 16 ayaa akhriyay
Waad ku mahadsan tahay aaladaha saaxiibtinimada leh sida WordPress, waligeed ma fududayn in la sameeyo degel. Si kastaba ha ahaatee, mar uun, waxaa laga yaabaa inaad rabto in laguu soo celiyo dhammaan shaqadaada adag.
Taasi waa halka ay ka soo galaan boggaga xubinimada. Markaad maxsuulkaaga ugu fiican gadaashiisa dhigto derbiga lacag bixinta, waa inaadan wax dhibaato ah kala kulmin daboolida kharashaadkaaga socodsiinta, iyo laga yaabee xitaa inaad faa'iido rogto.
Maqaalkan, waxaanu kaga wada hadli doonaa waxa ay yihiin boggaga xubinimada, iyo sababta ay u noqon karaan sirta kor u qaadida beddelka, heerarka hawlgelinta, iyo xariiqdaada hoose. Waxaan markaas ku tusi doonaa sida loo qorsheeyo oo loo dhiso goobta xubinnimada ugu fiican. Aan bilowno!
Hordhac Goobaha Xubinnimada
Goobta xubinimadu waa degel aad dhigto waxa ku jira foomka diiwaangelinta gadaasha. Tani way ka duwan tahay iibinta rukunnada. Rukunsashadu waxay siisaa macaamiisha marin u helka badeecada ama adeega in muddo ah, halka xubinimadu ay siiso isticmaalayaasha inay helaan waxyaabaha la daboolay.
Tusaalaha bogga bogga xubinnimada.
Goob kasta oo xubinimadeedu waa gaar. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira astaamo aad ka heli doonto guud ahaan mareegaha xubinnimada ugu waxtarka badan. Tan waxa ku jira foom is-diiwaangelin ah halkaas oo booqdayaasha cusubi iska qori karaan.
Tusaalaha foomka isdiiwaangelinta xubinnimada.
Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso foomka gelida dadka wakhti hore u qaatay inay iska diiwaan galiyaan goobtaada. Tani waxay awood u siinaysaa xubnaha inay galaan qaybaha xaddidan ee degelkaaga, wax ka beddelaan profile-kooda isticmaale, oo ay qabtaan hawlo kale oo xubnaha-kaliya ah.
Tusaalaha bogga gelitaanka xubinta.
Goobo badan oo xubin ka ahaanshaha ayaa leh waxyaabo gaar ah. Tani waxay qaadan kartaa qaabab badan, oo ay ku jiraan koorsooyin onlayn ah, golayaasha taageerada premium, iyo webinars.
Tusaale bogga koorsada khadka tooska ah ee Fizzle.
Xubinimada kale waxay ku siinaysaa helitaan faa'iidooyin dheeraad ah. Tan waxaa ku jiri kara lambarada qiimo dhimista ee dukaankaaga ecommerce ama xitaa gelitaanka abaalmarinta xubnaha-kaliya.
Abaalmarinta xubinta iyo faa'iidooyinka.
Waxaa laga yaabaa inaad xitaa soo bandhigto gelitaanka dhacdooyinka gaarka ah. Tusaale ahaan, naadiyo iyo dakhliyo badan ayaa maamula mareegaha xubinnimada.
Goobta xubinimadu waxay noqon kartaa walaxda sirta ah ee aad u baahan tahay si kor loogu qaado beddelka, heerarka hawlgelinta, iyo xariiqda hoose 📈 Wax badan ka baro halkan! 🤝Riix halkan Tweet
Maxaad U Doonaysaa Inaad U Samayso Goob Xubinnimo
Goobaha xubinimadu waa hab fiican oo lagu gato macluumaadkaaga. Ka dib marka la dhammeeyo habaynta bilowga ah, plugin xubin ka ahaanshaha wanaagsan ama madal waa inay si toos ah u fulisaa hawlo badan oo maalinle ah oo xubinimo ah.
Tan waxaa ka mid ah abuurista xisaabaadyo cusub, habaynta lacagaha, iyo qaybinta agabka xubnaha-kaliya. Sidaa darteed, goobta xubinimada waxay kaa caawin kartaa inaad abuurto faa'iido adigoon ku darin hawlo badan liiskaaga shaqo.
Haddii kale, waxaad ku bixin kartaa xubinnimadaada bilaash. Tusaale ahaan, waxa laga yaabaa inaad isticmaasho nuxurka daboolan si aad u dhaliso hogaan adoo codsanaya ciwaanka iimaylka qofka taas oo qayb ka ah habka isdiiwaangalinta.
Isticmaal boggaga xubinnimada si aad u abuurto hoggaan.
Diiwaangelinta mareegaha waxay u baahan tahay waqti iyo dadaal. Ka dib markii ay soo mareen dhammaan dhibaatooyinkan, xubnahaagu waxay u badan tahay inay dareemaan inay ku qasban yihiin inay si joogto ah u soo booqdaan goobtaada si ay ugu soo noqdaan maalgashigooda wanaagsan. Si aad u wadid ka-qaybgalka, waxaad xitaa isticmaali kartaa faahfaahinta xiriirka xubnahaaga ololayaasha suuqgeynta iimaylka.
Haddii shaqada xubinnimadaadu ay maamusho inay kordhiso gaadiidkaaga oo ay xoojiso ka qaybgalka, markaa tani waxay calaamado wanaagsan u diri doontaa makiinadaha raadinta. Tani waxay ka dhigan tahay in goobta xubinimada laga yaabo inay si aan toos ahayn u wanaajiso qiimeynta mashiinka raadinta.
Halka qaar badan oo ka mid ah goobaha xubinimada ay ka shaqeeyaan online, ganacsiyada jireed qaarkood waxay isticmaalaan xubinimada si ay u horumariyaan khibrada macaamiisha. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay goob jimicsi, waxaa laga yaabaa inaad macaamiisheeda cusub siiso ikhtiyaar ay isku diiwaan galiyaan onlayn. Tani aad ayey uga sahlan tahay in ay ku qasbaan inay shakhsi ahaan kuu soo booqdaan.
Sida Loo Sameeyo Goob Xubinimo (5 tilaabo)
Hadda oo aanu daboolnay faa'iidooyinka, aan aragno sida aad uga faa'iidaysan karto macluumaadkaaga, u abuuri karto hoggaan, oo aad u wanaajiso khibradda soo booqdaha. Halkan waxaa ah sida loo abuuro goob xubin ka ah shan tallaabo.
Talaabada 1: Aqoonso Dhagaystayaasha Bartilmaameedkaaga
Marka la bilaabayo ganacsi cusub, waa wax soo jiidasho leh in la beegsado dad badan intii suurtagal ah. Tani waxay u ekaan kartaa sida ugu habboon ee aad ugu kordhin karto faa'iidadaada. Si kastaba ha noqotee, marka aad isku daydo inaad qof walba rafcaan ka qaadato, inta badan waxaad soo jiidataa rafcaan qofna.
Adigoo diiradda saaraya niche gaar ah, waxaad u abuuri kartaa waxyaabo aad u soo jiidasho leh dhagaystayaashan saxda ah. Waxa kale oo aad habayn kartaa qayb kasta oo ka mid ah goobtaada xubinimada si aad ugu qanciso nichekan. Tan waxaa ku jira wax walba laga bilaabo naqshada goobtaada ilaa qiimaha iyo nooca macluumaadka aad bixin doonto.
Marka aad leedahay dhagaystayaal bartilmaameed cidhiidhi ah, inta badan waxaad si wax ku ool ah u suuqgeyn kartaa goobtaada xubinnimada. Tani waxay ku lug leedahay in aad fariintaada u habayso si aad ula hadasho baahiyaha gaarka ah ee macmiilkaaga. Iyadoo ku xiran dhageystayaashaada, waxaa laga yaabaa inay xitaa jiraan bulshooyin iyo goobo aad ku xayeysiin karto goobtaada xubinnimada. Waxaasoo dhan waxay u fiican yihiin heerarka beddelka.
Markaad go'aansanayso cidda la beegsanayo, waxaa muhiim ah in la helo meel weyn oo ku filan si loo joogteeyo goobtaada xubinnimada ee sii kordheysa. Halkan, waxaad isticmaali kartaa Google Trends si aad u cabbirto inta qof ee raadiya ereyada muhiimka ah ee la xidhiidha dhageystayaasha bartilmaameedka ah. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad qiyaasto xajmiga saldhigga macmiilkaaga.
Waxa kale oo laga yaabaa inay caawiso in la aqoonsado goobaha kale ee xubinnimada kuwaas oo la beegsanayo isla tirakoobka. Haddii goobahan ay u muuqdaan inay soo korayaan, markaa tani waxay caddayn kartaa inay tahay meel faa'iido leh.
Tallaabada 2: Go'aanso Qaabka Xubinimada
Kahor intaadan abuurin goobtaada, waxaad u baahan doontaa inaad go'aansato qaabka xubinnimada. Tani waxay ka dhigan tahay aqoonsiga macluumaadka aad u soo bandhigi doonto macaamiishaada. Macluumaadkaaga gaarka ah, xubnaha-kaliya waxa ku jiri kara wax kasta oo ka bilaabma koorsooyinka khadka tooska ah ilaa webinars wargelin ah, qoraalo blog gaar ah, muunado badeecado, dhibco abaal-marin ah, ama diritaan bilaash ah oo dhan dalabaadka.
Kadib, waa waqtigii la go'aamin lahaa inaad bixin doonto hal xubin ama aad abuuri doonto heerar badan. Haddii aad doorato kan dambe, dhagaystayaashaadu caadi ahaan waxay furi doonaan macluumaad badan iyo faa'iidooyin marka ay iibsanayaan heerar sare oo xubinimo ah.
Marka xigta, waxaad abuuri doontaa moodel qiimeed. Goobaha qaarkood waxay isticmaalaan xubinnimada oo kaliya si ay u qabtaan macluumaadka xidhiidhka iyo ka qaybgalka. Haddii kuwani yihiin yoolalkaaga, markaa waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad bixiso xubinimo bilaash ah.
Haddii aad go'aansato inaad lacag ka qaado, tani waxay noqon kartaa lacag hal mar ah ama kharash soo noqnoqda. Lacagaha hal mar la bixiyo waxay ku fiican yihiin abuurista lacag caddaan ah oo degdeg ah. Dhanka kale, lacagaha soo noqnoqda ayaa inta badan fure u ah bixinta dakhli joogto ah oo la isku halleyn karo oo sii wadi kara goobtaada xubinnimada muddada dheer.
Haddii aad go'aansato inaad lacag ku dalacdo, waxay kaa caawin doontaa inaad aqoonsato dhowr goobood oo xubin ka ahaanshaha oo ka shaqeeya warshadahaaga oo bixiya waxyaabo la mid ah. Waxaad markaa baari kartaa qiimahooda oo waxaad isticmaali kartaa tan si aad u ogeysiiso qaabka xubinnimadaada.
Tallaabada 3: Dooro Platform
Marka ay timaado doorashada madal, waxaad haysataa dhowr doorasho. Tusaale ahaan, waxa aad iibsan kartaa xal diyaar ah oo aad ku bixinayso rukunka si aad u geliso macluumaadkaaga, sida goobta la bari karo.
Platform-ka la baran karo.
Tani waxay noqon kartaa hab fiican oo si degdeg ah loo bilaabo goobta xubinimada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira inta badan baaxadda xaddidan si loo habeeyo madal-shelf-ka-baxsan.
Haddii kale, waxaad dooran kartaa Nidaamka Maareynta Maaddada (CMS) sida WordPress. Waxaad markaas kor ugu qaadi kartaa madal this la plugins in ay ku darayaa sifooyinka xubinnimada lagama maarmaanka ah.
Habkani wuxuu awood kuu siinayaa inaad u keento aragtidaada hal-abuurka nolosha oo aad ku habboonaato goobta caadiga ah si loo daboolo baahiyahaaga saxda ah. Si kastaba ha noqotee, habkani wuxuu u baahan karaa inaad baadho xalal kala duwan oo dhinac saddexaad ah oo aad waqti ku qaadato habaynta iyo ilaalinta plugins-yadan dheeraadka ah.
Kadib doorashada goobtaada, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad tixgeliso martigelinta shabakada. Doorashada qorshaha martigelinta saxda ah ayaa lagama maarmaan u ah shabakad kasta. Si kastaba ha ahaatee, waxay si gaar ah muhiim ugu tahay boggaga xubinnimada, maadaama ay sida caadiga ah ka kooban yihiin waxyaabo badan oo la gaaryeelay. Waxaa laga yaabaa in goobtaadu u baahan tahay inay u adeegto macluumaadkan tiro badan oo isticmaaleyaal ah.
Tani waxay gelin kartaa mareegahaaga culeys weyn. Sababtan awgeed, waa inaad doorataa qorshe martigelineed kaas oo ku ilaalin kara goobtaada xubinimada inay si habsami leh u socoto, iyada oo aan loo eegin cadaadiska. Marka Behmaster, waxaan bixinaa martigelin waxqabadka diirada saara taas oo si fudud u taageeri karta goobaha xubinnimada ee gaajeysan.
Behmaster Martigelinta Goobta Xubinimada
Fikrad ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad doorato bixiyaha martigelinta saxda ah markii ugu horeysay. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u baahan tahay inaad cusboonaysiiso bixiyahaaga, kooxdayada khubarada ah ayaa kaa caawin kara inaad u haajirto goobtaada xubinimada firfircoon mid kasta oo ka mid ah qorshayaashayada martigelinta.
Talaabada 4: Abuur Qaar ka mid ah Xubnaha-Kaliya Nuxurka
Si loo wado beddelka, goobtaada xubinimadeedu waa inay qiime u siisaa dhagaystayaasha aad beegsanayso. Qiimahani waxa laga yaabaa inuu ku jiro kala duwanaanshaha iyo tayada macluumaadkaaga.
Haddii kale, waxaad bixin kartaa waayo-aragnimo ku habboon. Tusaale ahaan, waxaad macaamiisha siin kartaa ikhtiyaarka ah inay iska diiwaan geliyaan naadigaaga internetka. Haddii tartamayaashaadu ay uga baahan yihiin dadka inay ku dhammaystiraan nidaamka xubinnimada taleefanka, isla markiiba waxaad noqotaa ikhtiyaarka soo jiidashada badan.
Sii qiimaha daawadayaasha la beegsanayo ka hor inta aysan xitaa is-diiwaangelin.
Meel kasta oo ay suurtagal tahay, waxaa wanaagsan inaad abuurto nuxurka xubinnimadaada iyo faa'iidooyinkaaga ka hor inta aanad aqbalin wax diiwaangelin ah. Tani waxay hubinaysaa in saxiixayaasha cusub ay bilaabi karaan ku raaxaysiga nuxurkaaga gaarka ah iyo faa'iidooyinka xubnaha-kaliya isla markaaba.
Adigoo hore u sii diyaarinaya nuxurka, waxa kale oo aad horumarin kartaa waayo-aragnimada xubinnimada. Haddi booqde uu ku tufo xubinnimada oo ay ku soo dhaweyso goob madhan oo eber ka kooban, tani waxay dhaawici kartaa sawirka sumadda iyo sumcadaada. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay cawdaan, qaar yarna waxay codsan karaan lacag celin.
Talaabada 5: La Soco Waxqabadka Goobtaada Xubinnimada
Waxqabadka goobtaada xubinimada waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa heerarka beddelka. Haddii goobtaadu ay gaabis tahay in la shubo ama dib u dhac ku yimaado, dadka soo booqda uma badna inay galaan oo ay noqdaan xubno lacag bixiye ah.
Xitaa haddii aad maamusho inaad ku qanciso booqdayaasha si ay u beddelaan haddii goobtaadu ay hoos u dhacdo, macaamiishu waxay si dhakhso ah uga tagi karaan xubinnimadooda. Heerkan hoos u dhaca ayaa saameyn weyn ku yeelan kara khadkaaga hoose.
Dugsiga Ganacsiga Harvard wuxuu ku qiyaasaa in haddii aad hoos u dhigto heerka dhimistaada ugu yaraan boqolkiiba shan, waxaad kor u qaadi kartaa faa'iidadaada ilaa 95%. Haddii aad ku qancin karto xubnaha inay meel la joogaan, tani waxay u tarjumi kartaa dakhli badan oo dheeraad ah oo ganacsigaaga ah.
Goobta xubinnimada ahaan, waxaad caadi ahaan u adeegi doontaa waxyaabo badan oo firfircoon. Tani waxay horeyba cadaadis weyn saartay server-kaaga, taas oo macnaheedu yahay inaad rabto inaad sameyso wax kasta oo awoodaada ah si aad u wanaajiso xawaarahaaga goobta.
Halkan, helitaanka qalab la socodka waxqabadka wanaagsan waa muhiim. Behmaster macaamiishu waxay la socon karaan waxqabadka goobahooda xubinimada iyagoo isticmaalaya Behmaster APM Qalabkan hadalka ah waxaa si cad loogu talagalay in lagu baadho arrimaha mareegaha WordPress.
The Behmaster Qalabka APM
Adoo dooranaya Behmaster APM qalabka la socodka waxqabadka guud, waxaad tilmaami kartaa arrimaha gaarka ah ee saameeya CMS-kan caanka ah. Tani waxay ku gelinaysaa meel adag si aad ula yaabto booqdayaasha leh xawaaraha boggaga hillaaca.
Mareegaha Xubinnimada ugu Fiican
Goobta saxda ah waxay dejin kartaa goobtaada xubinnimada si aad u guulaysato. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah dhise shabakad xubin ka ah oo go'an ama CMS ujeedo badan leh. Aynu eegno doorarka qaar.
Xubinnimadaadu waa dhise shabakad xubin ka ah oo u go'an. Waxay ku siinaysaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u abuurto goob xubinimo, oo ay la socoto waxyaabo dheeraad ah oo laga yaabo inaadan ka helin shabakad dhise guud:
Adigoo isticmaalaya xubinnimadaada, waxaad dejin kartaa qulqulka shaqada si toos ah hawlaha xubinnimada ee caadiga ah. Tan waxa ku jira jadwal cusboonaysiinta, fariimaha xaqiijinta, iyo iimaylada mahadsanid. Waxa kale oo aad si toos ah u soo saari kartaa qaansheegyada.
Si loo hubiyo inaad siiso khibrad wanaagsan xubnahaaga, waa muhiim inaad si dhow ula socoto dhaqankooda. Waxaad la socon kartaa dhagaystayaashaada adigoo isticmaalaya qalab guud sida Google Analytics ama xitaa plugin log ah.
Si kastaba ha ahaatee, Xubinnimadaadu waxay siisaa aragti faahfaahsan macaamiishaada. Gaar ahaan, waxay awood kuu siinaysaa inaad la socoto nolosha meertada xubinnimada oo dhammaystiran min xubin aan xubin ka ahayn ilaa xubin hawlgab ah. Tani waxay ku gelinaysaa meel adag si aad u aqoonsato macaamiisha sii baxaya oo laga yaabo inay kansalaan xubinnimadooda.
Xubinnimadaadu si cad uma daabicin qiimahooda. Si kastaba ha ahaatee, waxaad la xiriiri kartaa kooxdooda si aad ugala hadasho baahiyahaaga ama aad diyaarsato bandhig.
Tifaftirahan caanka ah ee jiid-iyo-soo-celinta ayaa fududeynaya in la abuuro shabakado kala duwan. Waxa kale oo ay farahaaga gelinaysaa xulasho qaab-qaabaysan oo xirfadaysan.
Goobta xudunta u ah Squarespace waxa lagu qiimeeyaa $12 bishii marka la soo dallaco sannadkii. Si kastaba ha ahaatee, Squarespace ma bixiso astaamo gaar ah oo xubin ka ah oo ka baxsan sanduuqa. Haddii aad rabto inaad martigeliso boggaga xubnaha-kaliya ee xagga dambe ee degelkaaga Squarespace, markaa waxaad u baahan doontaa inaad maalgeliso Aagga Xubnaha.
Haddii aad qorsheyneyso inaad sameyso suuqgeyn iimaylka, Aaga Xubinta waxay ku xirmi kartaa Ololaha Iimaylka Squarespace iyo Profiles. Tani waxay awood kuu siinaysaa inaad ka maamusho liiska iimaylka ee meel dhexe.
Hoos-u-dhac weyn ayaa ah in Aagga Xubnuhu ay u baahan yihiin is-diiwaangelin gaar ah, iyadoo qiimuhu ka bilaabmayo $9 marka la soo dallaco sannadkii. Qalabkani waxa kale oo uu dalacayaa boqolkiiba afar kharashka wax kala iibsiga xubintiiba.
Waxa kale oo xusid mudan in Aaga Xubnuhu ay ilaalin karaan oo keliya bogagga goobtaada Squarespace oo aanay daruuri ahayn waxa ku jira boggagan. Fayl kasta oo aad geyso goobtaada Squarespace wuxuu yeelan doonaa xiriiriye u gaar ah. Xidhiidhiyayaashan lama ilaaliyo, marka xubnuhu waxa ay la wadaagi karaan URL-yadan kuwa aan xubnaha ahayn, taas oo u sahlaysa inay ku galaan macluumaadkaaga lacag la'aan.
Haddii aad abuurayso xubnaha-kaliya agabka sida fiidiyowyada iyo faylalka maqalka ah, tani waxay noqon kartaa xaddidaad weyn. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in Aagga Xubintu aysan ahayn doorashadaada kaliya. Waxaa jira adeegyo dhinac saddexaad oo kala duwan oo ku milmay Squarespace, oo ay ku jiraan ku-darka MemberSpace.
Waxaad isticmaali kartaa software-ka qolo saddexaad si aad u xaddiddo gelitaanka bog kasta ama kheyraadka goobtaada Squarespace. Tani waa inay ka hortagtaa kuwa aan xubnaha ahayn inay galaan xidhiidhka tooska ah ee ilaha xubnaha-kaliya.
Waxaa jira wax badan oo ka mid ah dhisayaasha mareegaha guud ee suuqa, laakiin qaabkooda hal-cabbir-ku-habboon-dhammaan dhif iyo naadir ayaa bixiya mareegta xubinnimada ugu fiican. Si aad u dejiso goobtaada si ay u guulaysato, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad doorato meel la beddeli karo, madal la faafin karo sida WordPress.
Bogga hore ee WordPress.org
Markaad u doorato WordPress sidii CMS kaaga, waxaad heli doontaa xulasho balaadhan oo ah furayaasha xubinimada ee bilaashka ah iyo kuwa qaaliga ah. Tani waxay awood kuu siinaysaa inaad ka soo dukaameysato agagaarka oo aad hesho plugins-yada buuxiya shuruud kasta oo ku jirta liiska rabitaanka xubinnimadaada.
Ku socodsiinta goobta guulaysta maaha oo kaliya hirgelinta hawlaha xubinnimada xudunta u ah. Tusaale ahaan, booskaaga darajada raadinta raadinta ayaa go'aamin doonta tirada taraafikada ee aad hesho.
Iyada oo leh 60,000 plugins oo ku jira kaydka rasmiga ah ee WordPress oo keliya, waa inaadan wax dhibaato ah kala kulmin helitaanka plugins kaa caawin kara hagaajinta shay kasta oo ka mid ah goobtaada xubinnimada. Tusaale ahaan, Yoast SEO waa plugin caan ah oo ballanqaadaya inuu kor u qaadayo darajooyinka raadinta raadintaada.
Bogga hore ee kaydka plugin ee WordPress.
Dhinaca hoose waa inaad u baahan doontaa inaad wakhti ku bixiso raadinta iyo habaynta plugins-yadan. Tani waxay si weyn uga duwan tahay aaladaha xubinnimada ee go'an, kuwaas oo sida caadiga ah bixiya wax kasta oo aad u baahan tahay oo ka baxsan sanduuqa.
Mareegaha Xubinta Sare ee Plugins
In kasta oo aysan jirin yaraanta aaladaha xubinnimada ee loo go'ay, waxaan aaminsanahay in WordPress uu leeyahay dabacsanaan iyo karti aad u baahan tahay si aad u abuurto goobta xubinnimada adduunka garaaca. Haddii aad doorato WordPress, markaa tallaabada xigta waa doorashada plugin sax ah. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, waa kuwan saddexdayada ugu sarreeya ee xubinimada WordPress.
Waxaad isticmaali kartaa plugin WordPress ah oo bilaash ah si aad u abuurto goob xubin ka ah adigoon qorin hal xariiq oo kood ah. Plugin Xubnuhu waxa ay leedahay nidaam ogolaansho ku salaysan oo horumarsan kaas oo sahlaya in la xaddido waxa ku jira iyadoo lagu salaynayo heerka xubinnimada booqdaha.
Waxaad xitaa u diidi kartaa awoodaha heerarka xubinnimada gaarka ah. Tani waxay ku siinaysaa dabacsanaan dheeraad ah marka ay timaaddo dhisidda nidaamka oggolaanshahaaga:
Plugin Xubnuhu waxa kale oo ay leedahay widget foomka gelida u go'an. Tan waxaad ku dari kartaa walxaha soo noqnoqda ee goobtaada, sida bar-side. Kadibna, xubnuhu waxay ka gali karaan xisaabaadkooda bog kasta oo ka mid ah boggaaga, taas oo u fiican khibradda isticmaalaha.
Waxaad xitaa isticmaali kartaa Xubnaha si aad u abuurto goob gebi ahaanba gaar ah. Tani waxay noqon kartaa dariiq sahlan oo aad lacag uga samayn karto dhammaan buug-gacmeedkaaga macluumaadka. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa Xubnaha si aad u abuurto degel khaas ah, sida bogga shaqaalaha gaarka ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxa xubnaha ka duwan plugins kale waa xaqiiqda ah in ay lacag la'aan ah. Xubnuhu waxay noqon karaan doorasho soo jiidasho leh haddii aad ku shaqaynayso miisaaniyad xaddidan ama aad rabto inaad tijaabiso ka faa'iidaysiga macluumaadkaaga ka hor intaanad ballan qaadin plugin lacag ah.
Waxaad isticmaali kartaa plugin xubinnimada horumarsan si aad u abuurto heerar badan oo xubinimo ah, u xaddido gelitaanka macluumaadkaaga, oo aad aqbasho lacag bixinta. In kasta oo ay shaqeyneyso horumarsan, MemberPress waxaa loogu talagalay inay fududaato isticmaalka.
Iyada oo qayb ka ah habka habaynta, MemberPress si toos ah ayay u soo saari kartaa dhammaan boggaga loo baahan yahay si loo gudbiyo goobta xubinimada oo shaqaynaysa. Tan waxaa ka mid ah qiimaha, gelida, xisaabta, iyo boggaga mahadsanid.
MemberPress waxa kale oo ay taageertaa waxa ka tifqaya Kani waa nidaam aad ku sii daynayso nuxurka marxalado maalmo, toddobaadyo, ama xataa bilo ah. Adiga oo abuuraya ololeyaal dhibicyo, waxaad ku dhiirigelin kartaa xubnaha inay ku soo laabtaan goobtaada oo ay ilaashadaan danahooda muddada dheer.
Haddii aad rabto inaad abuurto goob xubinimo waxbarasho, waxaad xiisayn doontaa inaad barato in MemberPress ay kuu ogolaato inaad abuurto oo aad iibiso koorsooyinka dhijitaalka ah. Waxa kale oo ay la midaysaa noocyo kala duwan oo software suuq-geyneed oo caan ah, oo ay ku jiraan Mailchimp emaylka automation-ka.
Shatiyada Xubnaha Press waxay ka bilaabmaan $179 sanadkii. Shirkaddu waxay kaloo bixisaa dammaanad lacageed oo 14 maalmood ah.
Haddii aad rabto inaad iibiso koorsooyinka khadka tooska ah, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad eegto Nidaamka Maareynta Waxbarashada ee LearnDash (LMS). LearnDash waxay haysataa wax kasta oo aad ka filan karto LMS, oo ay ku jiraan awoodda lagu abuuro laguna qaybiyo agabka waxbarashada dhijitaalka ah.
LearnDash waxa kale oo ay leedahay qaybo xubinimo si aad u iibiso marin u helka ilahaaga. Waxaad markaas xaddidi kartaa gelitaanka macluumaadka iyadoo ku xiran heerka xubinnimada bartaha.
La kulma taageero martigelin WordPress gaar ah kooxdayada taageerada heerka-caalamka ah! La hadal isla kooxda taageerta macaamiisheenna Fortune 500. Eeg qorshayaashayada
Intaa waxaa dheer, LearnDash waxay taageero buuxda u haysaa qulqulka nuxurka. Tani waxay awood kuu siinaysaa inaad soo saarto qaybo cusub, heerar, iyo xitaa koorasyo ​​dhan, iyadoo xubnuhu si guul leh ugu shaqeeyaan dariiqa ay ku maraan agabkaaga waxbarasho.
Gaar ahaan, waxaad isticmaali kartaa sifooyinka xubinnimada qalabka si aad u dhiirigeliso waxbarashada. Tusaale ahaan, waxa laga yaabaa inaad ku abaal-marin karto xubnahaaga calaamado iyo shahaadooyin. Waxaad xitaa abuuri kartaa goleyaal koorsooyin gaar ah si ay gacan uga geystaan ​​kor u qaadida dareenka bulshada.
Haddii aadan qorsheyneynin inaad iibiso macluumaadka, waxaa laga yaabaa inaad hesho LearnDash xaddidaysa maadaama qaar badan oo ka mid ah sifooyinka si gaar ah loogu talagalay goobaha xubinnimada waxbarashada. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad iibiso koorsooyinkaaga ku salaysan xubinnimada, qalabkani wuxuu noqon karaa xalka ugu fiican. Shatiga LearnDash wuxuu u dhexeeyaa $189-$369 oo leh hal sano oo taageero iyo cusbooneysiin ah.
Sida Loo Abuuro Websaydh Xubinnimo leh WordPress iyo MemberPress (5 tilaabo)
Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo loo abuuro goobta xubinnimada. Xalka saxda ah wuu kala duwanaan doonaa, iyadoo ku xiran arrimo ay ka mid yihiin dhageystayaasha bartilmaameedka ah iyo waxa ku jira aad qorsheyneyso inaad iibiso. Si kastaba ha ahaatee, WordPress iyo plugin MemberPress waa isku-dar xoog leh.
Anigoo taas maskaxda ku hayna, aan aragno sida aad u abuuri karto goobta xubinnimada adigoo isticmaalaya labadan qaybood ee caanka ah ee software.
Tallaabada 1: Samee Goob Xubinnimo oo Aasaasi ah
Si loo bilaabo, waxaanu ku talinaynaa in la rakibo mawduuc xubinimo si xirfadaysan loo qaabeeyey. Waxaa jira doorashooyin badan, laakiin mawduuca OceanWP waa doorasho caan ah.
Mawduucan ujeedo badan leh ayaa la socota xulashada goobaha bandhigga kuwaas oo leh shaqeynta xubinimada oo lagu dhex dhisay. Tusaale ahaan, bandhigeeda Gym waxa ay siisaa macaamiisha xulashada heerarka xubinnimada.
Goobta jimicsiga ee xubinimada OceanWP.
Haddii kale, haddii aad qorsheyneyso inaad iibiso agabka waxbarashada, Bartender wuxuu siinayaa xubnaha inay helaan koorsooyin kala duwan. Kadib markaad doorato mawduucaaga, waxaad ku rakibi kartaa oo aad dhaqaajin kartaa plugin MemberPress.
Marka xigta, u gudub Xubinta Press > Settings. Shaashadan, waxaad geli kartaa furaha shatiga Xubinta Press. Marka aad si guul leh u kicisay plugin-kan, dooro Pages tab.
Tag goobaha Xubinta Press.
MemberPress waxay si toos ah u soo saari kartaa dhammaan boggaga aad u baahan tahay si aad u keento goobta xubinimada oo shaqaynaysa. Si aad u abuurto boggagan, hubi taas Si otomaatig ah u samee bog cusub waa la doortay dhammaan Bogagga la xafiday hoos u dhac. Dabadeed, si fudud u bixi Cusboonaysiinta Ikhtiyaarrada guji, iyo MemberPress waxay abuuri doontaa login, xisaab, iyo bogga mahadsanid.
Talaabada 2: Kudar Khadadka Lacag-bixintaada
Mararka qaarkood, waxaad u isticmaali kartaa xubinnimada si fudud qalab jiilka hogaanka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad qorshaynayso inaad lacag ka qaado, waxaad u baahan doontaa inaad samayso ugu yaraan hal albaab oo lacag bixin ah. Si taas loo gaaro, dhagsii Lacagaha tab, oo ay ku xigto the + Badhanka.
Ku dar khadadka lacag bixinta
Marka xigta, fur Gawaarida hoos u dhac oo dooro habka lacag bixinta ee aad rabto inaad ku darto. MemberPress waxay taageertaa Stripe, PayPal Express Checkout, PayPal Standard, iyo Authorize.net. Waxa kale oo ay taageertaa lacag bixinta offline.
Dooro albaabka lacag bixinta si aad ugu darto.
MemberPress hadda waxay soo bandhigi doontaa dhammaan goobaha aad u baahan tahay si aad u dejiso kadinka lacag bixinta ee aad dooratay. Tusaale ahaan, haddii aad doorato Heerka PayPal, ka dib MemberPress waxay ku weydiin doontaa ciwaanka iimaylka ee la xidhiidha koontadaada PayPal.
Si loo wado beddelka, waa fikrad wanaagsan in la bixiyo doorashada ikhtiyaarka lacag bixinta. Waxaad ku dari kartaa albaabbada badan ee goobtaada adigoo gujinaya inta yar + Badhanka.
Markaad dejiso dhammaan marinnada lacag bixinta, dhagsii Cusboonaysiinta Ikhtiyaarrada. Macaamiisha hadda waxay awoodi doonaan inay isdiiwaangeliyaan iyagoo isticmaalaya mid ka mid ah hababka lacag bixinta ee aad dooratay.
Tallaabada 3: Samee Heerarka Xubinimadaada
Marka xigta, waa waqtigii aad abuuri lahayd heerarka xubinnimadaada. Tani waxay noqon kartaa hal xubin oo siinaya gelitaanka dhammaan macluumaadkaaga, ama heerar badan. Dashboardkaaga, u gudub MemberPress> Xubinnimada> Kudar Cusub.
Kudar xubin cusub
Waxaad hadda habayn kartaa heerkan xubinimada Tan waxaa ku jira gelida cinwaan, dejinta qiimaha, iyo qeexida nooca biilasha.
Deji qiimaha xubinnimada iyo ikhtiyaarrada kale.
Marka aad ku faraxsan tahay macluumaadka aad galisay, dhagsii naadiya. Haddii aad rabto inaad bixiso doorashada heerarka xubinnimada, ka dib si fudud ku celi tillaabooyinka kore.
Talaabada xigta waa qeexida nuxurka la heli karo heer kasta oo xubinimo. Tani waxay kaaga baahan tahay inaad abuurto xeerar, markaa u gudub MemberPress> Xeerarka> Kudar Cusub.
Ku dar xeerar kala duwan.
Hadda waxaad dejin kartaa xeerkaaga. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad qeexdo in dhammaan macluumaadka loo qoondeeyay sumad gaar ah ay tahay inay helaan oo keliya xubnaha heerka Bronze:
Habee xeerarka xubinnimada.
Marka aad dhammayso dhammaan goobaha, badbaadi xeerkaaga. Biyo raaci oo ku celi si aad u abuurto sharciyo badan goobtaada xubinimada.
Tallaabada 4: Hirgeli Qorshahaaga Qiimaynta
Haddii aad u malaynayso in aad ku dallacayso xubinnimada, waxaad u baahan doontaa inaad abuurto qorshe qiimeed. Kani waa bog ay macaamiishu ku arki karaan dhammaan heerarkaaga oo ay is barbar dhigaan qiimahooda.
Bog qiimeeya oo si wanaagsan loo qaabeeyey ayaa soo jiidan kara dareenka booqdaha oo gaadhsiin kara dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin si ay u gaadhaan go'aan iibsi xog ogaal ah. Sidan, boggaaga qiimuhu wuxuu wanaajin karaa khibradda booqdaha iyo heerarka beddelkaada.
Si aad u abuurto boggan muhiimka ah, u gudub MemberPress > Kooxo > Kudar Cusub:
Kudar koox cusub oo xubinimo
Si aad u bilowdo, sii boggan cinwaan sharraxaya, sida Qorsheyaasha Qiimaha. Marka xigta, u gudub Xulashada Kooxda qaybta oo ku dar dhammaan xubnaha aad rabto inaad ku muujiso boggan. Waxaad markaas dooran kartaa dulucda boggaaga qiimaha.
Ku dar xulashooyinka kooxda
Markaad dejiso dhammaan xulashooyinka, dhagsii naadiya badhanka. Boggaga qiimaha hadda waa nool yahay.
Tallaabada 5: Kudar Foomka Galitaanka
Goob kasta oo xubinimadeedu waxay u baahan tahay foom gal ah. Maadaama ay tahay shay muhiim ah oo ka mid ah goobtaada xubinimada, waa fikrad wanaagsan inaad hubiso in foomkan had iyo jeer si fudud loo gaari karo.
MemberPress waxay ku siinaysaa ikhtiyaarka aad ku darto foomka gelitaanka isticmaalaha adigoo isticmaalaya widget. Tani waxay ku fiican tahay in lagu daro foomkan walxaha soo noqnoqda ee boggaaga, sida cagaha ama dhinaca.
Si aad ugu darto widget-ka galitaanka goobtaada, u gudub Muuqaal> Widgets. Waxaad markaas ku dari kartaa Xubinta Press Login widget-ka aag kasta oo u diyaarsan widget:
Ku dar widget-ka foomka gelitaanka
Si loo wado beddelka, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad ku darto bogga qiimeynta liiskaaga ugu muhiimsan ee navigation. Tani waxay hubinaysaa in booqdayaasha xiisaynaya ay waligood dhawr taago ka fog yihiin macluumaadkaaga qiimaynta.
Si aad wax uga beddesho liiska goobtaada, u gudub Muuqaal> Menus. Waxaad markaa dooran kartaa menu-kaaga ugu muhiimsan oo aad ku dari kartaa bogga qiimaha ee aad hadda abuurtay.
Diyaar ma u tahay inaad ka dhigto qoraalkaaga ugu fiican xubnaha-kaliya? 🤐 Halkan ka billow, oo u diyaar garow inaad aragto beddelaadyo sare iyo heerarka hawlgelinta 📈Riix halkan Tweet
Iibka hal-mar ah waa mid aad u fiican, laakiin furaha ganacsiga guuleysta wuxuu ku jiraa dakhliga soo noqnoqda. Waxaad dejin kartaa dakhli sugan, la isku halayn karo oo socon kara ganacsigaaga bilo ama xitaa sanadaha soo socda adiga oo iibinaya xubinnimada.
Aynu si degdeg ah dib ugu soo koobno ​​sida loo sameeyo mareegta xubinnimada shan tallaabo:
Aqoonso dhagaystayaasha aad beegsanayso.
Go'aanso qaabka xubinnimada.
Dooro madal, sida WordPress.
Abuur qaar ka kooban xubno-kaliya.
La soco waxqabadka goobtaada xubinnimada adigoo isticmaalaya qalab sida Behmaster APM
Ma qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan sida loo maamulo mareegta xubinnimada ee guuleysta? Noogu sheeg qaybta faallooyinka ee hoose!
3 siyood oo Google's Search Console u hagaajiyo gujisyada dabiiciga ah
Sida loogu daro isku xirka Sheekada Instagram (oo loo habeeyo)